သားလေးလား သမီးလေးလား ရနိုင်ခြေအပေါ် မျိုးရိုးဗီဇက ဘယ်လိုသက်ရောက်သလဲ - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် သားလေးလား သမီးလေးလား ဆိုတာ လူအများ စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇနီးမောင်နှံတို့ဟာ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ ကလေးကို ရနိုင်အောင် ယုံတမ်းစကားတွေအရရော သိပ္ပံနည်းကျ နည်းလမ်းတွေအရပါ ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးဖြစ်မလား၊ မိန်းကလေးဖြစ်မလား ဆိုတာ မျိုးရိုးဗီဇအပါအဝင် အကြောင်းအရာပေါင်း များစွာပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ယော်ျားလေးလား မိန်းကလေးလားဆိုတာ မျိုးရိုးေီဇက ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးလဲ
ကလေးငယ်ဟာ ယောက်ျားလေး ဖြစ်မလား၊ မိန်းကလေး ဖြစ်မလားဆိုတာ ခရိုမိုဆူမ်း X လား Y လား ဆိုတာပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဖခင်ရဲ့ သုတ်ပိုးဟာ ကျားဖြစ်မလား၊ မ ဖြစ်မလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒိအယူအဆအရ သုတ်ပိုးဟာ X ဒါမှမဟုတ် Y ခရိုမိုဆုမ်းကို မျိုးဥဆီ ယူဆောင်လာပါတယ်။ သုတ်ပိုးနဲ့ မတွေ့ရသေးတဲ့ မျိုးဥမှာ X ခရိုမိုဆုမ်း ရှိပါတယ်။
X ခရိုမိုဆုမ်းကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ သုတ်ပိုးဟာ မျိုးဥဆီရောက်လာရင် မိန်းကလေးရပြီး Y ခရိုမိုဆုမ်းကို သယ်ဆောင်လာရင် ယောက်ျားလေးရပါတယ်။ အဲဒိသုတ်ပိုး အမျိုးအစား နှစ်မျိုးစလုံးဟာ မျိုးဥဆီရောက်နိုင်ခြေ ဆတူရှိပါတယ်။ မျိုးဥဟာလည်း သုတ်ပိုးနဲ့ထိတွေ့ပြီးချိန်မှာ ကလေးတဦးအဖြစ် ကြီးပြင်းလာနိုင်ခြေ တူညီပါတယ်။
ယောက်ျားလေးဖြစ်မလား၊ မိန်းကလေး ဖြစ်မလား ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀/၅၀ ဆီ ရှိပါတယ်။ လူဦးရေ စာရင်းဇယားများအရ နှစ်တိုင်းမှာ ယောက်ျားလေး များဟာ မိန်းကလေးများထက် ပိုမွေးကြပါတယ်။ သီအိုရီတခုအရ Y ခရိုမိုဆုမ်း သယ်ဆောင်တဲ့ သုတ်ပိုးဟာ မိန်းကလေးဖြစ်စေမယ့် သုတ်ပိုးထက် သိသိသာသာ သေးငယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် Y ခရိုမိုဆုမ်းသယ်ဆောင်တဲ့ သုတ်ပိုးဟာ မျိုးဥဆီကို ပိုပြီး မြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇအပြင် လူရဲ့ သုတ်ပိုးနဲ့ မျိုးဥဟာ ကလေးရဲ့ ပုံပန်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ကျန်းမာရေး စတာတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ တခြားအကြောင်းခြင်းရာများစွာ ရှိပါသေးတယ်။ လူတဦးဆီမှာ ခရိုမိုဆုမ်း ၂၃စုံဆီနဲ့ ၄၆ခုရှိပါတယ်။ ခရိုမိုဆုမ်း တခုချင်းဆီမှာ မျိုးရိုးဗီဇပေါင်းများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကနေ မွေးချင်းမောင်နှမတွေကြားမှာ တူညီခြင်း၊ ကွဲပြားခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
သားလေးလား သမီးလေးလား ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ
MicroSort ဆိုတာ အသုံးအများဆုံး နည်းစနစ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းစနစ်မှာ လေဆာရောင်ခြည်၊ ဆိုးဆေးနဲ့ စက်ကိရိယာသုံးပြီး ခရိုမိုဆုမ်း X, Y သယ်ဆောင်တဲ့ သုတ်ပိုးတွေကို ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သုတ်ပိုးတွေကို ခွဲခြားနိုင်ဖို့ အမျိုးသမီးရဲ့ကိုယ်ထဲကို ပစ္စည်းကိရိယာတမျိုး ထည့်သွင်းရပါတယ်။
X ခရိုမိုဆုမ်း သယ်ဆောင်တဲ့ သုတ်ပိုးဟာ ပိုမိုကြီးမားတာမို့ ဆိုးဆေးကို ပိုမိုစုပ်ယူပြီး လေဆာရောင်ခြည်မှာ ပိုမိုအလင်းပြန်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းကိုသုံးပြီး သုတေသီများဟာ ပိုမိုတောက်ပတဲ့ X သုတ်ပိးတွေကို လျှပ်စစ်အဖိုဓါတ်ပေးပြီး သိပ်မတောက်ပတဲ့ Y သုတ်ပိုးတွေကို လျှပ်စစ်အမဓါတ် ပေးလိုက်ပါတယ်။
တခြားအသုံးများတဲ့ နည်းကတော့ စားသောက်မှုပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနတခုအရ Y သုတ်ပိုးဟာ အယ်လ်ကာလီများတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုပြီး အားကောင်းပါတယ်။ X သုတ်ပိုးကတော့ အက်ဆစ်များတဲ့ ဝန်းကျင်ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။
အယ်ကာလီ ဒါမှမဟုတ် အက်ဆစ်ကဲတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသောက်ခြင်းဟာ မိခင်ရဲ့ ကိုယ်တွင်းက pH ကို ပြောင်းလဲစေပြီး ကလေးဟာ ယောက်ျားလေးဖြစ်မလား၊ မိန်းကလေးဖြစ်မလား ဆိုတာပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးရဖို့ဆိုရင် ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ် စတာတေါ များမျးစားရပြီး ကယ်လ်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ် စတာတွေ လျှော့စားရပါတယ်။ မိန်းကလေး လိုချင်ရင်တော့ ပြောင်းပြန်စားသုံးရပါတယ်။
မျိုးပွားခြင်းအကြောင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို ပိုမိုသိရှိလာရင် ကလေးရဲ့ ကျားမကွဲပြားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ပိုမိုသိမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ မိမိအဖော်မှာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆိုးရွားတဲ့ပြသနာရှိနေရင် ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ သားလေးလား သမီးလေးလား ရွေးချယ်ရေး မကြိုးစားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
Choosing sex of your child. http://www.webmd.com/baby/features/choosing-sex-of-your-child#2. Accessed December 4, 2016.
Preimplantation Genetic Diagnosis: PGD. http://americanpregnancy.org/infertility/preimplantation-genetic-diagnosis/. Accessed December 4, 2016.
The science behind sex selection. http://www.babycentre.co.uk/a1014303/the-science-behind-sex-selection. Accessed December 4, 2016.
Choosing your baby’s sex: What the scientists say. http://www.babycenter.com/0_choosing-your-babys-sex-what-the-scientists-say_2915.bc. Accessed December 4, 2016.
ဘေဘီလေး လိုချင်တဲ့ စုံတွဲတိုင်း စားပေးသင့်တာလေးတွေက